Qormadii 2aad-Zaadka Oo Kaalinta Koowaad Kagaga Jira Hoos U Dhaca Dhaqaale Ee Dalkeena, Iyo Mooganaanta Dhibkiisa Shacabka.Qalinkii: Prof. Mursal Abdillahi Ismail. |
Qormadii 2aad-Zaadka Oo Kaalinta Koowaad Kagaga Jira Hoos U Dhaca Dhaqaale Ee Dalkeena, Iyo Mooganaanta Dhibkiisa Shacabka.Qalinkii: Prof. Mursal Abdillahi Ismail.
QORMADII LABAAD EE DARAASADA DAAHFURTAY Zaadka oo kaalinta koowaad kaga jira hoos u dhaca dhaqaale ee dalkeena iyo mooganaanta dhibkiisa ee shacabka.
Waxa aan muwaadin idiin soo gudbinayaa qormadii labaad ee daraasada aan ku sameeyay zaadka oo ay iisoo baxday inuu yahay adeeg dhaqaalaha dalkeena dhaawacay, ilaa imikana dhaawaciisu uu sii socdo laga yaabo hadii aan wax laga qaban inuu dili doono ama aasi doono dhaqaalaha dalkeena iyo hantida shacabka somaliland.
4. Telesom intee in leeg ayay ka faa’idaa adeegan?
Jawaabta su’aashan ayaa noqotay mid aad iiga nixisay kadib markii aan daraasada sameeyay, shirkadu waxa ay heshaa lacagta shacabka oo dhan boqolkiiba sagaashan 90% maadaama aanay telesom dhigin bangiga dhexe lacagta adeega zaadka ee numberska ah ugu jirta softwarekooda.
Taas waxa cadayn ah waxa kujira adeega zaad qodob sheegaya KHIDMADA MA XISAABTAADA AYAA LAGA JARAYAA. Marka aad diraysid lacag, hadaba ma jirtaa hal qof oo laga jaray lacagtaas khidmada ah taasi waxa ay ku tusaysaa in faa’idadoodii ay ka tanaasuleen iyadoo sababtuna tahay in ay lacagta oo dhan iyakau leeyihiin oo aanay cid la xisaabtamin.
Si aan taas shacabku u dareemin waxa ay fududeeyeen adeega sida loo isticmaalayay oo aanay dadku arkin qodobkaas.
Waxa aan xisaabiyay cadadka inta qof ee somaliland ee adeega zaadka leh, hadii ay tirada dadku somaliland dagan ay yihiin ugu yaraan sadex milyan (3 million) waxa aan average usoo qaatay 1.5 million qof in ay isticmaalaan adeegan.
Tusaale ahaan kasoo qaad in qofka ugu sareeyo uu ku isticmaalo adeegan 1000$ bishii ka ugu hooseeyana 100$ celcelis ahaan waxa celcelis ahaa soo baxaya 500$ bishii in qofkastaa ku isticmaalo adeega zaad.
Hadaba waxa aan isku dhuftay milyan iyo shanboqol oo qof oo midkastaaba 500$ ku isticmaalo bishii adeega zaadka waxa iisoo baxday cadadkan lacageed (1,500,000*500$)=7,500,000,000.
Bal muwaadin lacagta intaas cadadkeedu leegyahay masoo gashaa dakhli ahaan dawlada somaliland, maxaa la inagaga bedeshaa, ma tahay ilaahaybaan kugu dhaarshee lacagtaasi lacag wiiqaysa dhaqaalaha dalkeena.
Waxa hadaba nasiib daro ah in shacabku mooganyahay khasaaraha ka dhalan kara isticmaalka aduunka lacageed ee ay telesom inaga hesho.
Waxa aan qormada sadexaad kusoo bandhigi doonaa in shaa allah sharciga islaamku halkuu ka taaganyahay isticmaalka lacagta banii’aadamka ah. Maxaa xidhiidh ka dhaxayn kara shirkad isgaadhsiineed iyo bangi islaami ah.
Diinteena suuban ee ku salaysan shariicada islaamka maxay ka tidhi qodobadaas.
Muwaadin badbaadi dhaqaalaha dalkeena hantida shacabkeena, diinteena islaamka.
Waxa aan aad ugu mahadcelinayaa dhamaan muwaadiniinta iisoo jawaabtay ee taageersan qoraalkayga iyo daraasadan waxaanan idiin balan qaadayaa markasta in aan ahay muwaadin xaq ka saaranyahay badbaadinta dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba.
Qalinkii: Prof. Mursal Abdillahi Ismail.